Buldị bọlbụ dị iche iche n'ahịa, olee nke ị ga-ahọrọ? | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ofdị bọlbụ dị iche iche, olee nke ị ga-ahọrọ?
Tomas Bigordà | | Nchekwa ike, Omenala ulo, Gburugburu
N'isiokwu a anyị ga-akọwa ihe dị iche iche ụdị bulbs, ndị a na-ejikarị n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs, na uru na ọghọm ha.
N'ezie, ugbu a 18% nke uru nke ụgwọ ọkụ eletrik anyị ejiri na ọkụ na ụlọ na ihe karịrị 30% n'ọfịs. Ọ bụrụ na anyị họrọ ụdị nke ezigbo ọkụ maka ojiji ọ bụla, anyị ga-enweta ya chekwaa n’etiti 20% na 80% ike.
1 Akụkụ iji tụlee tupu ịmara ụdị bulbs:
2 Gịnị bụ Lumens? Na otu esi agbakọ ha
3 Na-atụ aro ọkụ maka ụlọ dị n'ụlọ
4 Buldị bulbs na ndụmọdụ maka ịhọrọ ha
4.1 Kacha mma LED bulbs
4.2 Kacha mma Eco halogen bulbs.
4.3 Incandescent bọlbụ.
4.4 Kacha mma Fluocompact bulbs.
5 Kedu njirimara ndị ị ga-atụle?
Akụkụ iji tụlee tupu ịmara ụdị bulbs:
1. arụmọrụ, nke bụ watts (w) nke ụdị ọkụ ọkụ dị iche iche riri.
2. Ndụ bara uru, nke na-ezo aka n’oge ụdị bọlbụ nke ọ bụla na-adịru ikpeazụ.
3. Agba,, ebe ọ bụ na ọkụ ọ ga-agba ga-acha odo odo ma ọ bụ na-acha ọcha na-adabere na ịhọrọ n'etiti ụdị bulbs dị iche iche. Nke a ga-adabere na teknụzụ ịchọrọ, ebe ọ nwere ike ịbụ ikanam, eco halogen ma ọ bụ fluocompact.
4. Ogwugwo Ha bụkwa akụkụ ndị ọzọ ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ n'etiti ụdị bọlbụ niile dị, ebe ọ bụ na bọlbụ ọ bụla eguzobewo ugboro ole ha nwere ike agbanye ma gbanyụọ.
Ihe ọzọ kwesiri iburu n'uche bụ na Ike oriọna na-azọpụta ọkụ anyị quanised their according to gị ncha, site na unit nke ụfọdụ a na-akpọ “lumensNalumens”Nke na-egosi oke oke ọkụ.
Kama, nke dị n'elu oriọna bọlbụ ha tụrụ na watt (W), na-egosi ole ọkụ eletrik rie.
Gịnị bụ Lumens? Na otu esi agbakọ ha
Ajụjụ mbụ anyị ga-ajụ bụ ịjụ onwe anyị ihe bụ Lumen?
Lumens, bụ nke International System of Mements iji tụọ ngbanwe dị nwuo, nha nke ike ọkụ sitere na isi mmalite, na nke a ọkụ ọkụ. Ọkụ bọlbụ ọ bụla na -emepụta site na 60 ruo 90 lumens, yabụ anyị nwere ike gbakọọ ya otu bọlbụ 15W ga-enye a mmepụta ọkụ nke ihe dị ka 1050 lumens. Kedu ihe ga-abụ ma ọ bụ pekarịa ihe bụ ọkụ bọlbụ 65W na-ewepụta.
Nke a bụ nsonaazụ nke usoro ndị a: Ezigbo Lumens = Nọmba nke Watts x 70.
Na-atụ aro ọkụ maka ụlọ dị n'ụlọ
Mgbe emechara ihe a niile, anyị nwere ike ịhụ ezigbo ihe atụ ga-eme ka anyị mata ole ike ịzọpụta ọkụ ọkụ dị mkpa maka ụfọdụ ohere, nke nwere ike ịbụ ụlọ ọ bụla n'ime ụlọ ahụ.
Knowmara ihe Ọkwa ọkụ na-atụ aro, anyị nwere na-ezo aka lux. Nke a bụ a otu ike nke ìhè nke International System, nke akara lx, nke dakọtara na ọkụ nke elu nke na-enwetakarị ma na-ejikọkwa ọkụ na-enwu ọkụ nke 1 lumen kwa mita mita.
Nke ahụ pụtara, ọ bụrụ na bọlbụ na-enwu ime ụlọ 400 lumen, na ọnụ ụlọ ahụ bụ square mita 20, ọkụ ọkụ ga-abụ 20 lx.
Dabere na nke a, e nwere ọnụ ọgụgụ ndị a tụrụ aro maka ogo ọkụ na gburugburu ebe obibi, dabere na mkpa nke oghere ọ bụla n'ime ụlọ:
Nri: nkwanye maka ọkụ ọkụ n'ozuzu dị n'etiti 200 na 300 lx, ọ bụ ezie na mpaghara ọrụ a kapịrị ọnụ (ebe a na-ebipụ nri ma kwadebe ya) adahade na 500 lx.
Ime ụlọ: maka ndị okenye, ọ bụghị ọkwa dị elu ka akwadoro maka ọkụ ọkụ n'ozuzu, n'etiti 50 na 150 lx. Ma na isi akwa, karịsịa maka ịgụ ebe ahụ, a na-atụ aro ọkụ ndị gbadoro anya ruru 500 lx. N'ime ụlọ ụmụaka, a na-atụ aro ya ntakịrị ozigbo ọkụ (150 lx) na ihe dị ka 300 lx ma ọ bụrụ na enwere ọrụ na mpaghara egwuregwu.
Ime ụlọ ezumike: Igwe ọkụ n'ozuzu nwere ike ịdị iche n'etiti 100 na 300 lx, ọ bụ ezie na ikiri telivishọn ọ na-atụ aro ka ị gbadaa gburugburu 50 lx na maka ịgụ ihe, dị ka n'ime ime ụlọ, ọkụ 500 lx lekwasịrị anya.
Bath: ị chọghị oke ọkụ, ihe dị ka 100 lx ezuola, ma e wezụga na enyo ebe ahụ, maka ịkpụ afụ ọnụ, itinye etemeete ma ọ bụ ịgbacha ntutu gị: ihe dị ka 500 lx ka a na-atụ aro ebe ahụ.
Steepụ, paseeji na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ obere ojiji: ihe kachasị mma bụ ọkụ ọkụ n'ozuzu nke 100 lx.
Buldị bulbs na ndụmọdụ maka ịhọrọ ha
Kacha mma LED bulbs
Ha bu okwu achoro maka Light Emitting Diode. Na duru bọlbụ Ha kachasị kwekọọ na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ha na-anọchite anya nhọrọ obibi na nke ọma.
Nke a bụ n'ihi na ha anaghị ewepụta oke CO2 n'ime gburugburu dịka ndị ọzọ ụdị bulbs, na-adịghị ewetara tungsten ma ọ bụ mercury.
Ma ọ bụrụ na anyị nyochaa isi atụmatụ kwuru okwu n'elu, ndụ nke ụdị bulbs dị iche iche, ọkụ ọkụ LED nwere ike iji ihe dị ka puku iri ise. Nchịkọta ego banyere oriri karịrị ihe dị ịrịba ama, ebe ọ bụ na anyị ga-eri ihe dị ka 80% na-erughị ihe ọ bụla ọzọ omenala incandescent bọlbụ.
Kacha mma Eco halogen bulbs.
Ọkụ nke ụdị bulb ndị a na-enye pụrụ iche bụkarị ihe okike na ha na-agbanye ozugbo. Banyere ndụ bara uru ya, ọ na-abụkarị puku awa abụọ, na-eri envelopu otu ụzọ n'ụzọ atọ dị obere karịa ndị na-enweghị atụ, nke anyị ga-aza ajụjụ n'okpuru.
Ọ dị mkpa iburu n'uche ọnwụ nke ike n'ihi mmetụta okpomọkụ, ebe ọ bụ na ụdị bọlbụ a ha na-eme ọkụ.
Ike oriri bụ nke kachasị elu na bulbs niile, nke anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na-egosi na ụgwọ ọkụ eletrik.
N'ụzọ dị mma, site na 2009 n'ihu, ọ na-emepụta ndọrọ ego nke ụdị ọkụ ọkụ a na ahịa, na-enye ụzọ maka ngwọta ka mma nke na-enye otu nsonaazụ ahụ maka nchapụta, mana jiri obere ihe oriri. N'otu oge ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke okirikiri, ha anaghị emepụta okpomọkụ ma mụta nwa ahụ agba ziri ezi.
Kacha mma Fluocompact bulbs.
A maara ụdị bulbs ndị a dị ka obere comsumption; na-enwe ndụ bara uru nke dị n'etiti puku awa asaa na puku iri, na-eri ihe n'etiti 75 na 80% pasent na-erughị bulbs ọdịnala.
Banyere ọkụ ọ na-enye, ndị a ụdị ọkụ ọkụ na-azọpụta A naghị akwado ha nke ọma maka iji ya na mpaghara njem. Ebe ọ bụ na ọ na-ewekarị sekọnd ole na ole tupu ịnye ha niile ike nke ọkụ gị.
Kedu njirimara ndị ị ga-atụle?
a) Oge ọ na-ewe ọkụ bọlbụ iji ruo kacha arụmọrụ, nke ahụ bụ, ngwa ngwa ọ na-agbanye.
b) Oghere oghere ma ọ bụ ọkụ ọkụ, nke pụtara na n'akụkụ dị ala, ọkụ ga-elekwasị anya na isi ihe a kapịrị ọnụ.
c) Ndụ bara uru nke bọlbụ ahụ, ya bụ, awa na ìhè nke bọlbụ dịruru.
d) Site na echiche dị mma, anyị ga-aga akwụkwọ. Anyị nwere ike ịchọta bọlbụ gburugburu ụwa, gburugburu, gburugburu ma ọ bụ kandụl.
e) E nwekwara ụdị dị iche iche nke bushing dabere na dayameta ya na threaddị eri nwere.
f) Ọnụ ọgụgụ nke oge ọkụ ọkụ enwere ike ịgbanwuo ma gbanyụọ, nke ahụ bụ, usoro ha.
g) Ike nke ìhè ma ọ bụ ìhè, n'ụzọ dị otú ahụ na nke ukwu nke lumens anyị ga-enweta ọkụ ka ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Ofdị bọlbụ dị iche iche, olee nke ị ga-ahọrọ?
Switzerland na-atụ vootu n'ọrụ iji mechie ụlọ ọrụ ike nuklia ya
Kedu ka igwe ikuku ma ọ bụ windmill si arụ ọrụ?